Ihhotela "eCrimea" (Sevastopol): ikheli, isithombe, ukubuyekezwa
ECrimea ubhekwa ne of eyintandokazi iholide izindawo ngoba abaseRussia engxenyeni kwekhulu le-19 yesibili. Ngemva kokubuyela e-inhlonhlo ku Russian Federation inani labo abafisa ukuchitha amaholide abo lapho liye landa ngendlela emangalisayo. Yingakho abantu abaningi banesithakazelo ulwazi mayelana amahhotela e Yalta, Sevastopol, Yalta, Sudak nezinye zokungcebeleka YaseCrimea. Okwamanje, lapho kwaqala ukwakhiwa asebenzayo izikhungo zezempilo ezintsha futhi amakhaya lonke. Ngesikhathi esifanayo iyaqhubeka ithandwa futhi turobekty ezakhiwa phakathi nenkathi yamaSoviet. Lokhu kuhlanganisa ukuhlala emahhotela nokusebenzisa "eCrimea" (Sevastopol). Kuthathwa okungcono yokuhlala inketho phakathi ekilasini "umnotho" ehhotela kanye ine indawo ithatha elula.
ehhotela ezintathu-star "eCrimea" (Sevastopol) wafakwa ukusebenza ngo-1979 futhi ngaleso sikhathi elalibhekwa njengelinye lamazwe best ifakwe kule nhlonhlo. Siqukethe olulodwa esakhiweni 14 storey nge zommbila eziningana. Izivakashi nenombolo eyodwa, kabili, kathathu futhi quadruple letingemasayizi lahlukene (kusuka sq 15 kuya 28. M) benethuba isikhala eyengeziwe (clamshell), ingqikithi 408.
In ngamunye kubo, ngaphandle ezine, i-TV kanye ifriji. Amakamelo 2-bedroomed yokushaya ucingo.
Ihhotela yakhelwe kanyekanye yokuhlala 408 abantu mi. Ngesikhathi esifanayo ngesikhathi samaholidi kunzima ukuthola isihlalo esingenamuntu, njengoba amanani aphansi futhi izindawo endaweni ekahle lihlukaniswe ukuncintisana phakathi turobektov efanayo.
Izingane avumelekile kusukela eminyakeni emihlanu. Igumbi Paid nokudla. Ukuze isiphetho edingekayo isitifiketi sokuzalwa, isitifiketi eziwuhlupho imvelo. Uma they sondela eholidini ngaphandle kwabazali, ke wokugada kumelwe ube amandla ommeli.
Ayikho Isaphulelo inikezwa ehhotela.
Ezokudla okuhlelwe yokudlela nge ihholo-moya. Intengo akufakwanga yokuhlala. Amanani e yokudlela okulandelayo:
ibhulakufesi ruble 150;
Isidlo sasemini - ruble 188;
Dinner - ruble 166.
Njengakwezinye izindawo eziningi amahhotela eCrimea, ama- izivakashi kuyodingeka ukujwayela umbono wokuthi amanzi ashisayo egumbini uzonikezwa isheduli: ekuseni phakathi 07:00 kanye 09:00 kusihlwa - kusuka 20:00 kuya 22:00.
Amasevisi eyengeziwe oluwanikeza izivakashi uma isidingo ukusizakala okuthunyelwe zosizo lokuqala. Ngaphezu kwalokho, bakwazi ukuqasha iseli idiphozi ibhokisi ephephile noma ushiye izinto kwemithwalo. It unikeza endaweni yokugunda izinwele, futhi ngo-Internet-club, lapho, njengoba elisendaweni yokwamukela abantu, etholakalayo-Wi-Fi internet.
Ihhotela "eCrimea" (Sevastopol) has zayo siqu ibe banzi car park, kanti ihhotela kungathatha imoto ukwenza Uhambo kuya izinto eCrimea, elise ezizungeze idolobha.
Ihhotela "eCrimea" (Sevastopol) has a nengqalasizinda athuthukile. On the indawo kukhona:
Igumbi lenkomfa abantu 90 ngoba ezihlukahlukene emihlanganweni sombuso, izingqungquthela ibhizinisi nesayensi nezinye izenzakalo ezifanayo;
ubuhle kanye massage amakamelo;
Ngaphezu kwalokho, labo abakhetha ukuhlala kule ehhotela, izotholakala zonke izingqalasizinda Sevastopol city centre, kuhlanganise ubuhle salon, izindawo zokudla, ukuzijabulisa kanye eziyinxanxathela.
Eduze square itholakala lezi zihlubuki kanye nezikhungo zezokwelapha eziningi, ezifana nemitholampilo kwamazinyo, ngakho esimeni esiphuthumayo, izivakashi ngeke ahlale ngaphandle bezokwelapha abanekhono.
Amaphepha adingekayo ukuze ixazululwe
Ukuze ube lodger CURRENT "eCrimea", kuzodingeka:
- civil noma ipasipoti yangaphandle;
- umshwalense wezokwelapha International.
Ngaphezu kwalokho, labo abeza ukwelashwa, kufanele baphathe incwadi sibhedlela.
Njengoba sekushiwo, ihhotela "eCrimea" (Sevastopol) libhekisela "ezisemadolobheni" isigaba. Kusukela ku-kamasipala itshana khulula lolwandle, eliqhele-1 km away, kungenziwa esafinyelelwa trolley ibhasi noma inombolo itekisi 2 futhi 6. Kepha ikuphi okunye ukuzijabulisa 200 nje amamitha kude ingenye izikhungo ngobukhulu ezemidlalo komuzi, okuyinto has a-swimming pool, ithenisi izinkantolo nasezinkundleni zezemidlalo. Hlala ufanelekile ehhotela. Ikakhulukazi, ejimini ehhotela "eCrimea" (Sevastopol) libhekene khona imishini yesimanje kulabo abakhetha sokungcebeleka asebenzayo.
Ihhotela «eCrimea» Sevastopol: Izibuyekezo
Labo abaye bahlala kule ehhotela, uqaphele ukuthi ngokuvamile, sebanelisekile nge izinga lenkonzo. Esikhathini Ukubuyekeza uthi leli hhotela kufanelekile labo ukuze Sevastopol eze ukubona indawo futhi ufuna ukuyisebenzisa njengendlela yekucala hambo ukuba kuhanjelwe amanye amadolobha yale nhlonhlo, futhi eliseduze. Lo mbono isekelwe yokuthi leli hhotela ngempela kude ebhishi eliseduze, futhi libhekisela "ezisemadolobheni" isigaba. Njengoba for the service, izikhalazo mayelana umsebenzi abasebenzi e ukubuyekeza, ingekho. Ngesikhathi esifanayo, abanye izivakashi ayenganelisekile inamandla itjheje monotony kanye nokuntuleka imenyu ukukhetha. Ezinye izihambeli ungathandi yokuthi ehlobo ukulayishwa Sevastopol. Ihhotela "eCrimea" (bheka ngezansi isithombe.) - indawo netihoe, ngempela ezinomsindo emaphasishi esikoleni noveranda ngezikhathi ezithile. Nokho, bekuyoba ongaziwa ongakulindela okuthile okuhlukile ngale nkathi yamaholide.
Izikhangibavakashi etholakala eduze ihhotela
Njengoba sekushiwo, iningi lezihambi bakholelwa ukuthi liyindawo engcono kakhulu kube axazulule abathandi hambo ezithakazelisayo, kuba ehhotela "eCrimea". Sevastopol idume zalo ezikhangayo, futhi amanye awo ngaphakathi ukuhamba ibanga noma drive iDemo kude. Ikakhulukazi, esondelene kakhulu "eCrimea" itholakala Ipaki Communards. Kuyinto isikhumbuzo yezinxushunxushu esidlule mbuso ka Sevastopol. Kukhona bangcwatshwe abadumile uLieutenant P. Schmidt, Admirals eziningi owaziwa Soviet nososayensi. Ingabe isikhumbuzo crew we "eKursk", abavikeli ka Sevastopol nabanye.
Ihhotela kalula, futhi LikaKristu UMsindisi Cathedral, wakha ekuqaleni kwekhulu lama-20.
Ihhotela "eCrimea" (Sevastopol): Ikheli
Ihhotela itholakala cishe maphakathi edolobheni, eduze Plaza amavukelambuso. ikheli lakhe -. 6-I Bastion Street, 46. eliseduze stop ezokuthutha zomphakathi lemizuzu-3.
Ukuze uthole ehhotela "eCrimea", kumelwe siqale ufika Sevastopol ibhasi noma isitimela esiteshini. Khona sizokwazi ukusebenzisa omunye ezimotweni ezazihamba nemizila № 4, 107, 84, 109, 105, 110, 112, wokuba ame ngesikhathi Square Vosstavshih.
Manje uyazi lapho ihhotela "eCrimea" (Sevastopol), kanye nokuthi yiziphi izinsizakalo kanye izindawo zokungcebeleka inikeza.
Club Ihhotela Delfino 3 * (Turkey / Antalya) - izithombe, amanani, kanye nokubuyekeza zezivakashi ezivela eRussia
Ama-orchid kuyona Phuket e Karon (Thailand): incazelo ehhotela, izilinganiso
Belmare Ihhotela 3 * (Greece / Rhodes) izithombe, izibuyekezo
Noginsk ehhotela "Aniva": ikheli, incazelo amakamelo, ukubuyekezwa
Villa Maria Revas 5 * (Bulgaria / Sunny Beach): Izibuyekezo
Okumangazayo AI-powered - kuyini?
Ngabe ulindzele empeleni, uma nizosho iphupho umlilo
Coney Island (Coney Island), e-USA, i-New York: incazelo, ukubuyekezwa
Gastro Erosive: ukuxilongwa, ngokwelashwa nokuvimbela. gastro Erosive: ekwelapheni amakhambi abantu
Zintathu ntambo: ngezibuyekezo nezithombe
Izincwadi: zingaki izinhlamvu nemisindo? Umsindo nezinhlamvu - isigaba 1
Udrako lolwandle yisigqila esinobuthi esiyingozi esihlala eLwandle OluMnyama
Cod ethosiwe: zokupheka
Sibutsetelo umsakazo Pioneer FH-X700BT
Isidayeli Kuhle kakhulu "Android". Indlela esikhundleni isishayeli okujwayelekile "Android"?
Supplement 'Alpha-lipoic acid' - umsizi ekulweni nesifo sikashukela